कुरैले जि’त्ने चलाख हुन्छन् यी ५ राशि भएका ब्यक्तिहरु….. – SUDUR MEDIA
कुरैले जि’त्ने चलाख हुन्छन् यी ५ राशि भएका ब्यक्तिहरु…..
जानकारी धर्मदर्शन रोचक
April 21, 2021 April 21, 2021 AdminLeaveaComment on कुरैले जि’त्ने चलाख हुन्छन् यी ५ राशि भएका ब्यक्तिहरु…..
हामी धर्म, ग्रन्थ देखि ज्योतिष विज्ञान सम्म निक्कै विश्वास गर्छौ । पृथ्वीको उत्पती देखि मानिसको जन्म, मृत्युका बारेमा ज्योतिष विज्ञानले बोलेको कुरा ब्रमाण्डका सबै मानिसले पत्याउदै आएका छन् । हामी कति बुद्धिमान या समझदार छौँ भन्ने कुरा हामी आफैँ बताउन सक्दैनौ । समझदारी या हाम्रो बुद्धि कौशलको अनुमान तब मानिसलाई थाहा हुन्छ, जब हामी कुनै विपत्तिमा आफ्नो दिमागको सही प्रयोग गर्छौँ ।
तुला राशि : चलाकीपूर्वक बुद्धिको प्रयोग गर्नु पनि एक कला हो, जो हाम्रो ज्योतिषीय गुणमा समावेश छ । हुनतः हरेक व्यक्तिमा आफ्नो गुण हुन्छ तर आज हामी राशिको माध्यमले थाहा पाउने छौँ कि वास्तवमा कुन–कुन राशि भएका मानिस अधिक चलाक र बुद्धिमान हुन्छन् ।
कुम्भ राशि: यदि कुनै सोचलाई परिवर्तन गरी केही नयाँ काम गराउने सोच्नुहुन्छ भने यसको लागि तुला राशि भन्दा राम्रो कुनै राशि हुनसक्दैन । तुला राशि भएका मानिसहरूसँग हरेक समस्याको समाधन हुन्छ । जब कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएमा यस राशिका मानिसले हरेक किसिमले समाधान निकालेर नै छोड्छन् ।
कन्या राशि : यिनिहरूको दिमागमा सधैँ अलग र क्रिएटिभ आइडियाले जन्म लिन्छ । यो राशि भएका मानिस आफ्नो कुशलतालाई देखाउन कहिलै पछी हट्दैनन् । यी मानिसहरूमा सबैको मनमा राज गर्ने कौशल हुन्छ । यिनीहरू ज्ञानको धनि हुन्छन्, आफ्नो गहन ज्ञानको कारणले यी मानिस हरेक समस्याको कुनै न कुनै हल निकाल्छन् आलोचक र विश्लेषक ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कन्या राशि हुने मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै यिनीहरू ज्यादै बुद्धिमानी हुन्छन् ।
मीन राशि यी मानिसहरूले उचित अवस्थामा मात्र प्रतिक्रिया जनाउँछन् । यिनीहरू एक–एक गरि आफ्नो दिमागमा विचारलाई सिर्जना गर्दछन् र सही समयमा नै बलियो रहेको त्यस विचारलाई सबैको अगाडी देखाउँछन् । यी मानिसहरू अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मात्र अगाडी बढ्छन् यस राशिलाई भावुक राशि भनिन्छ र जब कुरा दिमाग चलाउने आएमा यो राशि भएका मानिसहरू आफ्नो हिसाबले काम गर्छन् ।
सिंह राशि : यदि यिनीहरूमा कुनै एकदमै महान विचार छ भने त्यसमा हृदय देखि नै काम गर्छन् र त्यसलाई सबैको सामु ल्याउन अधिक मेहेनत गर्छन् । यी राशि भएका मानिसहरू एक महान बुद्धिको स्वामी हुने गर्छन् चलाकको राजा सिंह राशि भएका मानिसहरूलाई यदि कुनै यस्ता काम दिनुहोस्, जसमा बढी दिमाग लगाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ ।
हुनसक्छ कि उनीहरूले पहिलो पटक त्यो काम नबुझे पनि तर हार मान्दैनन् । यस राशिका मानिसहरूले थोरै ढिलो समझदारी देखाउँछन् तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि यी मानिसहरू बुद्धिमान हुँदैन यिनीहरू कुनै पनि काम सोच्नको लागि थोरै समय लगाउँछन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन् यी ३ राशिका बुहारी, मानिन्छन् लक्ष्मी समान ! ज्योतिष विज्ञानमा हामी नेपालीहरु जो कोहीले धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन् । यस्तै मध्य एक राशि अनुसारको व्यवहारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ ।
(१) वृष राशी: वृष राशि हुने युवतीहरु धेरै नै समझदार हुन्छन् । आफ्नो मात्र खुशी मात्र नभई पूरै परिवारको खुशीलाई यस राशि हुनेहरु प्राथमिकतामा राख्छन् । अभावमा पनि चित्त बुजाउन सक्ने हुँदा परिवार माथि आइलाग्ने हरेक दुखमा वृष राशि हुने बुहारीहरुले साथ दिन्छन्। शहनशक्तिले भरिपूर्ण हुनाले पनि यस राशि हुने बुहारीहरु उत्कृष्ट मानिन्छन्। निर्णय लिने मामलामा पनि यस राशि हुनेहरु समझदार मानिन्छन्।
(२) कन्या राशिः कन्या राशि हुने महिलाहरु शान्त स्वभावका हुन्छन् । कुनै पनि विषयमा छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् । कलह देखि पनि कन्या राशि हुनेहरु टाढा रहन रुचाउँछन् । जसकारण बुहारीको रुपमा कन्या राशि हुने युवतीहरु उदाहरणनै बन्न सक्छन् । परिवारको हरेक कार्यमा आफ्नो सहभागिता जनाउने हुँदा परिवार खुशी रहन सक्छ । आर्थिक मामिलामा पनि कन्या राशि हुने बुहारीहरु बुद्धिमानी मानिन्छन् ।
(३) मीन राशिः मीन राशि हुने बुहारीहरु पनि उत्कृष्ट मानिन्छन् । उनीहरु आफू भन्दा पनि परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । परिवारमा आइपर्ने दुख माथि विशेष निगरानी रहने गर्छन्, दुखको समयमा परिवारलाई उचित सल्लाह दिन्छन् । यति मात्र नभई उचित कदम चाल्न सक्ने समेत यस राशि हुने बुहारीहरुमा क्षमता हुन्छ । बाहिरी उकसाहटमा कुनै पनि कदम चाल्नु अगाडी धेरै सोच्ने हुँदा पनि मीन राशि हुने बुहारीहरु लक्ष्मी समान हुन्छन् ।
थप समाचारः माथिल्लो तलाकी डेरावाला दिदीले भनिन्: भाई आफ्नो कोठामा साँ’घुरो भए कहिलेकाहि मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि ! रावाल दिदी भनिन् ! — कहिलेकाहीँ त्यता साँ’घुरो भए सु’त्न मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि भाइ । कुनै अ’प्ठेरो मान्नुपर्दैन, आफ्नै सम्झे हुन्छ,’ म डेरा सरेको तीन दिनपछि डेरावाल दिदीले भनेकी थिइन् । दिदीको त्यो भनाइ वास्तवमै सहज थिएन, उनले मलाई किन त्यसो भनिन् ? तीन-चार दिनसम्म मलाई सो’चमग्न बनाएको थियो । म बस्ने माथिल्लो तलामा दिदीको कोठा थियो ।
उनी को हुन्, यो शहरमा के गर्छिन् र उनको परिवारमा को कति छन् भन्ने केही जानकारी थिएन मलाई ।एउटै घरमा बस्ने भएकोले उनीसाग मेरो हाइ-हेल्लोको मात्र स’म्बन्ध थियो । घरको तल-माथि गर्दा देखादेख हुन्थ्यो । उनी मलाई देख्ने बित्तिकै म’सक्क म’स्केर केही न केही सोधिहाल्थिन् – ‘चिया पिउनुभो ? खाना खानुभो ? नु’हाउनुभो … ?’ यस्तै-यस्तै सवाल रहन्थे उनका ।
शनिवारको दिन कौसीमा घाम ताप्दै घरबेटी दीदीलाई मेरो नाम सबिन हो । म काठमाण्डुको पकनाजोलमा बस्छु । मेरो पेसा सैनिक भएकोले बिहान सबेरै अफिस जान्थे । एक दिन शनिबार नुहाएर कौशिमा बसिरहेको थिए, पल्लो घरको घरबेटी दिदी नुहाइरहेको देखे । त्यो दिदीको घर भन्दा म बसेको घर अग्लो भएकोले मैले सबै कुरा देख्ने अबसर पाए । त्यो दिदीको पोटिलो दू’धका फाँ’चा, टाईट थाई देखेर घुटुक्क थू’क निले । तर त्यो दिन बोलचाल केहि पनि भएन ।अनि उनको पोटिलो ढूध र टाईट थाई सम्झदै दुईपटक छोलेँ । एकदम आनन्द आयो ।
अनि मैले पनि तेहि भएर अहिले बोलाएको नी दिदी भने । दुबै जना गफ गर्दै सोयम्भमा पुग्यौ र सँगसँगै पकनाजोलसम्म गफ गर्दै घरसम्म आयौँ । दिदीले सबै कुरा बाटोमा नै गर्नुभएको थियो बूढा र छोरो अमेरिका गएको रहेछ । दिदी तीन बर्षदेखि एक्लै बस्नुहुँदो रै’छ । चिया खान जाउ भनेर जिद्दी गरेपछि म पनि दिदीको घरमा नै गएँ । एकदम डेकोरेशन मिलाइएको घर अनि सजावट देखेर म पनि अचम्म परेँ । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई टीभी हेर्दै गर्नु म चिया पकाएर ल्याउछु भनी किचनमा गई । मर्निङ वाकमा गएको ड्रेसमा झन से’क्सी देखिन्थी । मेरो सानो भाई उठिरहेको थियो ।
आज एकैदिन सुनको भाऊ यति धेरैले बढ्याे ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
पहिलो पटक मेकअप बिनाकी श्रीमती देखेपछि विवाह गरेको दुई दिनमै श्रीमानले दिए ‘डिभोर्स’…..
आजको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७७ साल पौष ०१ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर १६ तारिख